Sakafo ho an'ny mofo
Te-hanao mofo ve ianao, tsy hoe sakafo matsiro ihany, fa koa ilaina toy ny azo atao? Avy eo dia manamboara tsiranoka maitso, izay ho fomba tsara hafa amin'ny levodrano ary manao makotrokotroka tsy misy fandraisana anjara.
Bezdruzhzheva manantena ny hanina mofo ao an-trano - recipe
rano madio - 510 ml;
kibon'ny kakazo - 3 tbsp. sotro kely;
tantely voninkazo tantely - 20 g;
Atombohy amin'izay, arotsaho ao anaty vilany ny rano, atsipazo amin'ny vay ary atsipazo ao anaty jirofo.
Isaky ny adiny iray isaky ny adin-tsakafo dia alefa ao anaty hafanana isika, ary avy eo dia tapaka ny fakan-tsakafo ary avela ho mangatsiatsiaka amin'ny hafanana 40 degre.
Ampio ny tantely ao anaty ranon-javatra mamohehatra, mifangaro izany mandra-pihenany ary manomboka mandevy tsikelikely ao anaty lafarinina ary mampifangaro ny volom-borona.
Mahazo ny endriky ny lalivay ho toy ny crème maitso matevina isika, ary avy eo dia manarona ny fitoeran-javatra miaraka amin'ny takelaka ary miala amin'ny hafanana mandritra ny efatra amby roapolo ora.
Ny tsara indrindra dia tokony hitombo ao anatin'ny roa na roa volana sy tapany, ary avy eo dia azo ampiasaina hanamboarana mofo tsy misy lalivay.
Homemade rye fanombohana ho an'ny mofo tsy misy leviora
rano madio - 400 ml;
koba lafarina - 400 g.
Ny fanomanana ny fanombohan-tsakafo iray manan-danja ho an'ny mofo dia manomboka amin'ny hoe isika dia mampifangaro zato tapitrisa miala sasatra ihany, manondrahana mihoatra ny efapolo efatry ny rano ary mitovy ny lafarinina lafarinina ao anaty vilia. Tokony ho toy ny masomboly toy ny pasteur, toy ny endriky maitso matevina amin'ny density.
Mialà vonton-drano feno fotaka miaraka amin'ny masirasira amin'ny hafanana sy ny fahanginana mandritra ny andro iray hanombohana ny dingan'ny fery. Indraindray dia ilaina ny mampifangaro ny fototry ny fery.
Ny ampitson'io dia ampio rano an-jatony an-jatony tapitrisa, voanio grama zato ary mampifanaraka tsara ny masony. Avelao hialokaloka mandritra ny efatra amby roapolo ora.
Rehefa tapitra ny vanim-potoana, dia tokony ho hita mazava tsara ny blastera eo amin'ny endriky ny mpiara-migadra, izay mamoaka heisiny kely.
Ankoatra izany, dia ampitomboina ny lafarinina sy ny rano amin'ny lalivay ary avelantsika ho an'ny gazoala.
Andro iray hafa taty aoriana, ampio ny ampahany sisa amin'ny rano sy ny koba lafarinina ho an'ny mpiantoka, afangaroy ny hafanana ary avelao hijoro ho an'ny andro hafa.
Mandritra izany fotoana izany dia tokony hitombo avo roa heny ny volom-bala, hahazoana teboka bubble ary mamoaka karazana azy ary manitra malefaka, fa mahafinaritra.
Azonao atao ny mampiasa ny antsasak'ilay vovoka mba hahazoana mofo. Ny ampahany sisa dia azo "homena" lafarinina sy rano ary indray mandeha indray mandeha mandritra ny iray andro, aorian'izay dia tapa-kevitra ny hitehirizana ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Ho an'ny fikojakojana maharitra dia ilaina ny manome ilay karaoty isan-kerinandro miaraka amin'ny ampahany mahazatra ny lafarinina sy ny rano, ary aorian'ny fampidinana ny grenady, dia avereno indray mandritra ny herinandro ao amin'ny vata fampangatsiahana.
Amin'ny fomba mitovy amin'izany ihany, afaka manomana masirasira tsy avy amin'ny olom-boafidy, fa amin'ny lafarinina varimbazaha ihany koa. Miaraka amin'ny ampahany tsara, ny singa qualitative, ary koa eo ambanin'ny toetry ny mari-pana tsara, ny vokany dia mitovy.
Ahoana no fomba hanomanana tavy ho an'ny mofo avy amin'ny voaloboka?
voaloboka tsy voasasa - tanana;
koba lafarina - 340 g.
Mba hanomanana ny lalivay momba ny voaloboka dia tsy tokony ho menaka mandritra ny fotoana fohy ao anaty rano iray izy, avy eo mash kely na miora ary miverina amin'ny rano iray ihany ary manalefaka azy hatramin'ny 40 degre.
Ampidiro ao anaty rano miaraka amina raozy misy menaka siramamy sy tapany antsasakadiny ny kobam-bary, afangaroy, afangaroy amin'ny lamba ary ento am-patana mandritra ny iray andro.
Rehefa tapitra ny fotoana, manasivana ny masera amin'ny alalan'ny fantsomailala na gaza isika, manipy ravina, ary ampio ny siramamy sy lafarinina sisa tavela any amin'ny toeram-ponenana misy ranom-boaloboka, dia atsipazo izany ary avelao ny volabe mba hianjera mandritra ny efatra ora sy sasany.
Vokatr'izany, mahazo fanamafisana fanamafisana ho an'ny akoho homemade isika.
Ahoana no hanamboarana kitay?
Kitapo misy paoma tsy misy atody
Mofomamy avy amin'ny mofomamy manitra ao anaty lafaoro
Ireo fanomezana tsy mahazatra indrindra
Puffs with holes
Gitara avy amin'ny zava-mamy
Tsy mahatsiaro tena amin'ny psikology
Ambasadin'ny Vatikana ao Kazakhstan
Loko noforonin'ny tanan'ny tanana
Trano ho an'ny efitrano an'ny ankizy
Ahoana ny fomba hampianarana york amin'ny toetr'andro?
Hairbrushes ho an'ny volo
Necatose - soritr'aretina